विज्ञान/प्रविधि Archives - Page2of6-
अचम्म तर सत्य: यी ६ वर्षका बालकले गर्दैछन् महिनामै करोडौंको कमाई !
मङि्सर २६, २०७४ NK-Bigul Media
काठमाडौं, पढ्ने र खेल्ने समयमा एक ६ वर्षको बालकले गरेको आम्दानी सुनेर तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ । जसले गर्दा उनले राम्रो आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई पछाडि धकेलेका मात्रै होईन नराम्रो सँग …
के तपाई स्मार्टफोनको कम स्टोरेजबाट समस्यामा हुनुहुन्छ? यो एप डाउनलोड गर्नुस!
एजेन्सी, आजभोलि स्मार्टफोनहरु जसमा १६ जीबी र ३२ जीबी स्टोरेज नर्मल हुदै गएको छ । अझै पनि अधिक रुपमा स्मार्टफोनहरु कम स्टोरेजको समस्यामा अल्झीएका छन् । स्टोरेज फुल भए पश्चात …
२०१८ मा लन्च हुन लागेको आईफोनमा यस्तो नयाँ फिचर भित्रिदै !
मङि्सर २५, २०७४ NK-Bigul Media
एजेन्सी, आइफोन ८ को राम्रो व्यापार पश्चात एप्पल कम्पनी अब एक अपडेटको तयारीमा रहेको छ । सूचना अनुसार २०१८ मा लन्च हुनलागेको आईफोनमा धेरै समयसम्म ब्याट्री टिक्ने हुनेछ । केजीआई (KGI) सिक्योरिटको एनालिस्ट्सको …
गूगलले लन्च गर्यो डाटा बचाउने नयाँ एप, अब डाटा युजर्सलाई यस्तो फाइदा!
एजेन्सी, संसारकै सबैभन्दा ठुलो टेक्नोलोजी कम्पनी गूगलले मोबाइल डाटा बचाउने ‘Datally’ नामको एक एप लन्च गरेको छ । यो एप एन्ड्रोइड यूजर्सको लागि रहेको छ । यो एपले स्मार्टफोनमा सबै …
व्हाट्सएपले दियो ग्रुप एडमिनलाई यस्तो शक्ति, अब अनुमति बिना म्यासेज पनि पठाउन नमिल्ने!
एजेन्सी, संसारको सबैभन्दा ठूलो सन्देश एप्स, व्हाट्सएपले समूह व्यवस्थापक (ग्रुप एडमिन) लाई नयाँ शक्ति दिएको छ। यसको अर्थ अब ग्रुप एडमिनले कुनै पनि मेम्बरलाई म्यासेज पठाउन बाट रोक्न सक्नेछ । मतलब …
स्मार्टफोन चार्ज गर्दा नगर्नुहोस यी चार गल्ति, नत्र हुनेछ नोक्सान !
मङि्सर १२, २०७४ NK-Bigul Media
प्रविधिको विकासले आजकल साना बच्चादेखि ठुला व्यक्तिसम्मका मानिसहरुको हातमा स्मार्टफोन देख्न सकिन्छ । समय अनुसारले स्मार्टफोनको डिमाण्ड पनि उतिकै बढ्दो छ । सामान्यतय मानिसहरुले स्मार्टफोन चलाउदा निकै गल्ती गरिरहेका हुन्छन । …
फेरी ट्विटरले ल्यायो नयाँ फीचर, यस्तो छ फाईदा !
एजेन्सी, ट्विटरले पछिल्लो केही समय अघि देखि आफ्नो यूजर्सहरुलाई नयाँ-नयाँ अपडेट ल्याउदै सजिलो बनाउदै गईरहेको छ । अब फेरी ट्विटरले नयाँ फिचर्स अपडेट गर्न लागेको छ । यो सुविधा अपडेट भए …
अनुमति बिना युजर्सको लोकेसन देखाइदिएपछि ट्विटरले माग्यो माफी !
माइक्रो ब्लगिंग साइट ट्विटरले पछिल्लो हप्ता केही यूजर्सको ट्वीटमा उनीहरुको लोकेशन बिना अनुमति देखाईएको थियो । त्यसपश्चात ट्विटर कम्पनीले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर यूजर्सहरुसँग माफी पनि मागेको छ । ट्विटरले आफ्नो …
बिकसित प्रबिधि र बदलिदो समाजमा कम्पुटर र ल्यापटपको प्रभाव निकै परेको देख्न सकिन्छ । मानव जीवनमा कम्पुटरको प्रयोग लगभग दैनिकी आवश्यकता झैँ भईसकेको छ । आजभोलि अफिस देखि लिएर शैक्षिक क्षेत्रसम्म …
आफ्नो ‘बहादुरी’ को कारण चर्चामा छिन् ‘कटप्पा’ की छोरी, यस्तो कामले पाईन् चौतर्फी वाहवाही
१५ घण्टा अगाडि Dip
सफलताको मात चढेपछि आफ्नो ब्वायफ्रेन्डको चटक्कै माया मा:_रे यी अभिनेत्रीले
१६ घण्टा अगाडि Dip
मलाइकाको अहिलेसम्मकै ह:_ट अवतार, तस्बिरले जिउ नै शिरिङ्ग पार्नेछ तपाईको
१९ घण्टा अगाडि Dip
सुनसान घना जङ्गलको खोलामा सबै कपडा खोलेर मस्ती गरिरहेको भेटियो यस डान्सरलाई…
५० वर्षमा पनि कश्मीरालाई छोएन बुढ्यौलीले, जवान युवतीलाई टक्कर दिने मस्त जवानीको तस्बिर हेर्नुस्
मलाइका अरोडाले बिकिनी लगाएर उडाईन् अर्जुन कपूरको होश, हेर्नुहोस् तस्विरहरु !
१ दिन अगाडि SG2
यी कलाकारको भएको थियो दर्दनाक तरिकाले निधन , कसैले पत्तै पाएनन् !
१५ वर्ष ठुलो युवकलाई डेट गर्थिन् ज्याकलिन, थुप्रैसँग रहिसक्यो अफेयरको चर्चा !
६ दिन अगाडि SG2
यस डिसेम्बर महिनामा शुभ-अशुभ कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् डिसेम्बर महिनाको मासिक राशिफल !
३ दिन अगाडि RT
दीपिका पादुकोण देखिइन् पति रणवीरको शैलीमा, कालो हिलमा-सेतो मोजा: तस्बिर भाइरल हुँदै !
नेपालको तर्फबाट मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता सहभागी नम्रता श्रेष्ठले बिना सरम सार्वजनिक गरिन् यस्ता तस्बिर!
२ दिन अगाडि RT
कट्रिना र विक्कीको विवाहमा यति आलिसान कोठामा बस्नेछन् पाहुना, एक रातको भाडा यति लाख !